2020 Maguta Akanakisa eKisimusi muUS anonzi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » 2020 Maguta Akanakisa eKisimusi muUS anonzi
Kuputsa Kufamba Nhau • Culinary • tsika nemagariro • Hospitality Industry • nhau • Kutarisirwa • Shopping • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Nemhemberero dzeKisimusi dzakamanikidzwa ne Covid-19 denda asi mari yakazara yezororo inotarisirwa kuwedzera kana ichienzaniswa ne2019, nyanzvi dzekufambisa nhasi dzaburitsa gwaro renzvimbo dzakanakisisa dze2020 dzeMhemberero dzeKisimusi.
Kuti uone maguta api achapa holly jolly zororo kunyangwe pakati pekunetseka kwedenda re COVID-19, nyanzvi dzakafananidza maguta zana makuru eUS zvinoenderana nezviratidzo gumi nezvishanu zveKisimusi yakachengeteka uye inodhura. Iyo data yakatarwa yakatangira kubva ku COVID-100 makesi kusvika mukuwanika kwetsika dzeKisimusi kune iro ruzhinji rwekupa kweguta.
Akanaka Maguta eKisimusi
2. San Jose, CA 12. Virginia Gungwa, VA
4. Oakland, CA 14. Kansas Guta, MO
8. Portland, KANA 18 Austin, TX
Miami ine yakanyanya Krisimasi miti yemapurazi (pasikweya midzi yevagari), 0.024851, inova ka23.2 zvakapetwa kupfuura muIndipolis, guta rine vashoma pa0.001072.
Honolulu ane mashoma COVID-19 kesi muvhiki yapfuura pamunhu, 1,591.53, inova kakapetwa ka7.1 pane muLubbock, Texas, iro guta rine vakawanda pa11,275.64 XNUMX.
Orlando, Florida, ine yakanyanya mabhekaji (pa square mita yevagari), 0.356257, inova 9.4 zvakapetwa kupfuura muNorth Las Vegas, Nevada, iro guta rine vashoma pa0.037850.
Indianapolis ine yakaderera kwazvo avhareji mutengo wewaini, $ 3.63, inova 4.1 nguva yakaderera pane muSeattle, iro guta rine yepamusoro pamadhora 14.89.
Seattle ane akanyanya mabhangi ezvekudya (pasikweya midzi yevagari), 0.024190, inova ka20.2 zvakapetwa kupfuura muBoston, guta rine vashoma pa0.001200.